Wavala ethandwa kudivayisi nemfashini - tablet - akaboni induku. Yini kungaba imbangela kanye zesinyathelo okufanele basithathe ukuze usize devaysu yakho "ukubona ukukhanya"? I ukungaqondani ezivamile thina sikanye nawe bese uthinta ku kulesi sihloko.
Ngaphambi Ukusola nomkhiqizi ukuhluleka, kufanele babheke ngokucophelela ku okushiwo mbuzo: "Kungani ithebhulethi akaboni induku?" Phela, ngezinye izikhathi kuba umthengi engakwazi ukuqonda izenzo ezidingekayo ngakho okwagcina ihlasela abesilisa amakhono ukusebenza imishini, kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo ukusebenza kwe-umshini electronic. Ngiyavuma, hhayi wonke umsebenzisi possesses ulwazi olubanzi zekhompyutha. Kodwa-tablet - ikhompyutha amancane nokobana ikhono ukuxhuma amadivayisi neuropathy, kanye yangaphandle isitoreji ngemoto, ezifana-Flash media ezinhlobo ezehlukene.
Uma ukukhuluma olunye ulimi, okuyinto wena uyimfihlakalo uma uziqonda interlocutor? Lutho neze! nokungaqondi okunjalo sizalwa nawo isimo, lapho ipuleti akaboni induku kokuba alibonakali, ukuthi akuyona ifayela format igajethi uhlelo owaziwa. Engingakusho nje ukufometha Flash-drive e FAT32 ejwayelekile usebenzisa ikhompyutha kudivayisi yakho ukuze abone ukuthi izinto zase kulindeleke "isivakashi". Lokho isistimu yamafayela oshiwo ngenhla (Ifayela Nokwabiwa Ithebula) evumela ephathekayo umsebenzi devaysa kahle nge ezihlukahlukene ulwazi flash abezindaba. Noma kunjalo, ake zonke ukuze ...
Uma ithebhulethi akakuboni microSD induku:
1. Qinisekisa ukuthi ubuqotho ngokomzimba khadi. Visual wokuhlola for umonakalo mechanical, ezifana igawula, ukusonteka imihuzuko ajulile ungaba ugculiseke e isetshenziswe ezingafanele ngamabomu okuyiphutha "umnakekeli" ulwazi.
2. Uma usebenzisa i-adaptha (adaptha), funa oxhumana: kumelwe ahlanzeke futhi abe mahhala namachibi namafutha bona.
3. Ngezinye izikhathi, i-tablet akakuboni USB flash drive ngokusebenzisa iphutha isifundi sekhadi esingu - idivayisi ekhethekile lula ukuvumelanisa yobukhulu ahlukahlukene bese uthayipha Flash amakhadi. Hlola ukuthi kuba "ajwayelekile" inkumbulo uyabubona kuqala. Uma omubi, isidingo faka abashayeli kudivayisi.
4. Isixhumi nakho kungaba ibangelwa "kusahamba kahle." Nalapha futhi, isidingo uhlole indlela ubuqotho physico-technical ikhebula, futhi efakwe idatha isofthiwe ukuhambisana ukusetshenziswa ngedivayisi ngokusebenzisa ilungu yokuxhuma.
5. Qiniseka ukuthi wathenga i-Flash akuyona ejwayelekile SDHC micro noma SDXC. Lena iphuzu elibalulekile kakhulu, njengoba ivolumu ngemoto ezinjalo zivame ukubangela ukuqhuma azivumelani ihadiwe zedivayisi, ikakhulukazi uma sithatha inothi ukuthi idivayisi yakho ingeyona esigabeni ohlonishwa. Ngokuvamile, uhlobo ikhadi micro-CD, kungagcini ukubaluleka ngokulinganisa of 8 GB. Amaphilisi Iningi isabelomali zenzelwe inkumbulo ezengeziwe eziyisishiyagalombili.
Okubalulekile! Ukudlala indima izimo ezinkulu ukusebenza: Esiteshini (wayichoboza), isondo izithuthi zomphakathi (ubungozi inertial umonakalo), uhlobo sebhasi evulekile (imvula, dampness, ukushisa, uthuli) - zonke lezi zici kuthiwa predetermined isimo "ithebhulethi wayeka kokubona induku."
USB nezixhumi manje ifakwe cishe yonke electronics. Idivaysi ephathekayo - akukho okuhlukile ngokuqondene nalo mthetho. Adume futhi esetshenziswa zonke esibonakalayo serial, plus-Flash drive, sesiye iyingxenye ebalulekile umsebenzisi ezweni zobuchwepheshe amadivaysi digital. Nokho, induduzo kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo ezinjalo i yenethiwekhi Imininingwane ngezinye izikhathi kungaba nzima sina yalabo idivayisi ayisekeli "Enkulukazi" imiqulu. Ngakho-ke, ngokuvamile kwenzeka ukuthi ithebhulethi akakuboni USB-flash drive ezibucayi usayizi imperceptible. Kodwa nokho, uma uqiniseka ukuthi uxhumekile ku-Flash inkumbulo elihlangabezana nazo zonke izidingo lobuchwepheshe kanye uhlelo, kanye neqiniso yobukhona (Ukuthola) isitoreji igajethi uhlala kuwe, "imfihlakalo", banake iphuzu ezibalulekile eziningana:
Ngo mode ezimele, amandla enikeziwe tablet iningi USB ibhasi voltage alwanele; lokhu kungenxa ngokuyinhloko isetjenziswa onjiniyela, ngomqondo ongokomfanekiso, zamandla umnotho wesifunda.
Ezinye amagajethi azitholakali noma une ekhubazekile yokuxwayisa ukwethulwa amadivayisi, anwebekayo inkumbulo izakhiwo. Kulokhu kuhle ukufaka imenenja yefayela, noma wenze devaysa izilungiselelo ukuthola okukhethwa kukho.
Ngokuvamile ithebhulethi akaboni induku ngoba isetshenziswa ukuxhuma OTG-ikhebula lide kakhulu noma ukulimala lokukhanda.
Esimeni lapho zonke izindlela, balingwa ngaphandle yalokho, nokwethembela abezindaba Flash efundekayo waqinisekisa ubufakazi obungenakuphikwa, 'abaphuphuthekiswe' igajethi yakho ezidinga ukulungisa okhokhelwayo.
I-Tablet Nexus - ikhambi ekahle isiphi isimo
Lofner Jared Lee, "Arizona umcibisholo": Biography, umusho
I ovulekile GPX: imfundo
Ukudlulisela komhlaba kusukela isigaba eyodwa kuya kwenye: izimo futhi inqubo
Isithombe ebuntwaneni - cat Matroskin. Ubani uzwakalise uhlamvu, futhi ukuthi siyamthanda?